Maka Protectionlọ Ọrụ Nchedo Ọkụ, Ndị Na - eweta Ya - China Maka Ndị Na-emepụta Nchedo Ọkụ
Ntu-na Mwekota na Rubber
Dị ka otu n'ime ndị na-asọmpi ụlọ ọrụ kachasị asọmpi, a na-eji ntu anyị na roba eme ihe maka ịkwado ọkpọkọ na mgbidi, ụlọ na ala. Ha enwetakwala nnukwu ewu ewu n’ụwa niile, ọkachasị na Europe, Middle East na Asia. Ọzọkwa, elu kọntaktị nke elu na ala ọkara gburugburu nwere rọba rọba abụọ n'ime.
Mgbapu Mpepu Mpepu Mpepu na EPDM Rubber Lining
Dịka otu n'ime ụlọ ọrụ kachasị asọmpi nke ụlọ ọrụ, a na-eji mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ ikuku anyị na EPDM na-ejikọta ya na mpempe akwụkwọ nke abụọ na mkpọchi mkpọchi abụọ. Ha enwetakwala nnukwu ewu ewu n’ụwa niile, ọkachasị na Yurop na Eshia. Ọzọkwa, a na-eji akwa roba EPDM eme ihe maka mkpuchi mkpọtụ.